Weghachi iPhone si ndabere - Olee otú iji weghachi si iPhone ndabere faịlụ
> Resource> iPhone> Olee otú iji weghachi iPhone si ndabere
Olee otú iji weghachi iPhone si ndabere
Adịkwa data gị iPhone nwere ike ime n'ihi na nza nke ihe, gụnyere: gị iPhone gbajiri ma ọ bụ zuru; niile data na iPhone-ehichapu mgbe ịrụzi; data tụfuru mgbe iOS nweta nkwalite; mmadụ na mberede ihichapụ faịlụ site na ya; ụlọ ọrụ mmepụta ihe resetting. Ọ dịghị onye pụrụ ịkọ mgbe ọdachi ga-egbu, ma ọ na-eme. Ya mere, echefula na-eme ka mgbe backups maka gị mkpa data. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mfe weghachi gị iPhone si ndabere faịlụ, dị ka na-eweghachiri si aga backups na iTunes ma ọ bụ iCloud.
Nkebi nke 1: Weghachi iPhone si Previous ndabere (Nhọrọ Weghachi)
Part 2: iPhone Weghachi si na nkwado ndabere na iTunes (Niile Weghachi)
Nkebi nke 3: Weghachi iPhone si ndabere site iCloud (Niile Weghachi)
Otú ọ dị, ihe na-aga a obere difficultly. Ị nwere ike ghara weghachi akụkụ nke data ma ọ bụ wepụ ihe ọ bụla ọdịnaya site iTunes na iCloud backups, ma Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recvery), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) pụrụ inyere gị aka ime ya. Ọ na-enyere gị ka ịhụchalụ na weghachi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ selectively.
* Preview data tupu mgbake dị ka kọntaktị, foto, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, wdg
* Ò Kwekọrọ n'Ozizi na ọhụrụ iOS 9 ma na-akwado iPhone iPone 6S Plus / iPhone 6S / 5S / 5C / 5 / 4S / 4, niile iPads na ndị ọzọ.
* enwetaghachi data furu efu ruru nhichapụ, ngwaọrụ ọnwụ, jailbreak, iOS nweta nkwalite ma ọ bụ ụlọ ọrụ ntọala weghachi.
Cheta na: ma nsụgharị nke ihe omume na-eme ka i nwee ike iṅomi na-agbake data gị iPhone ozugbo, mgbe ị na-adịghị iTunes / iCloud ndabere.
Ọzọ, ka ego Olee otú iji weghachi iPhone si ndabere na Wondershare Dr.Fone maka iOS na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1 iṅomi iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere
Naputa site na iTunes ndabere File: Mgbe ị họrọ onye a, ndị niile ndabere faịlụ ga-egosipụta na-akpaghị aka. Ebe a gị na mkpa iji họrọ onye na ị chọrọ iji weghachi, na gaba "Malite iṅomi".
Cheta na: Wondershare Dr.Fone ma ọ bụ iOS nanị iṅomi ma wepụ data site na iTunes ndabere maka gị. Ọ gaghị echeta ọ bụla data. All data naanị ike na-agụ na-azọpụta site onwe gị.
Naputa site na iCloud ndabere File: Mgbe ị họrọ onye a, i kwesịrị banye na gị iCloud akaụntụ mbụ. Mgbe ahụ, ị nwere ike ibudata ma wepụ ihe ọ bụla ndabere faịlụ na gị iCloud na akaụntụ, na-ego ọdịnaya nke ya.
Cheta na: Ọ bụ 100% mma banye gị iCloud akaụntụ. Wondershare Ewe nzuzo gị kpọrọ ihe. Dr.Fone Ghara ịnọgide na-ozi ọ bụla na ọdịnaya nke akaụntụ gị na data. Ebudatara ndabere faịlụ na-na na-azọpụta na gị onwe gị obodo kọmputa.
Nzọụkwụ 2 Weghachi iPhone ndabere si iTunes / iCloud
Ebe a niile faịlụ na nkwado ndabere na mpaghara e egosipụta, na i nwere ike ịhụchalụ na ego ha otu otu. Mgbe previu, ego ndị ị chọrọ azụ na-azọpụta ha.
Cheta na: Wondershare Dr.Fone-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data si iPhone iPhone 6S Plus / iPhone 6S / iPhone 6 Plus / iPhone6 ​​/ 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS / 3G, mgbe ị na-adịghị iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Dr.Fone n'okpuru nwere a na-agbalị ugbu a.
Nzọụkwụ 1 Run iTunes na jikọọ na gị iPhone
Nke mbụ niile, jikọọ gị iPhone na kọmputa na-agba ọsọ iTunes. Mgbe ọ na-achọpụta rụọ gị iPhone, pịa na aha gị iPhone n'okpuru menu nke ngwaọrụ na n'aka ekpe. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window n'okpuru.
Nzọụkwụ 2 Họrọ a na nkwado ma weghachite ya na gị na iPhone
Iweghachi gị iPhone si okenye ndabere, pịa na "Weghachi si ndabere ..." bọtịnụ na-acha uhie uhie gburugburu na window n'elu. Mgbe ahọrọ a ndabere faịlụ na mmapụta window ma weghachi ya na gị na iPhone.
Cheta na: N'ụzọ dị otú a, ị mkpa iji weghachi dum ndabere dochie niile data na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji weghachi dum ndabere ma ọ bụ hapụ ẹdude data na ngwaọrụ gị, ị nwere ike họrọ ụzọ Part 1.
Dị nnọọ ka Iweghachi iPhone si iTunes ndabere, Apple adịghị ekwe ka ị hụchalụ ọdịnaya nke iCloud ndabere faịlụ. Ị nwere ike ma weghachi ya kpamkpam, ma ọ bụ ihe ọ bụla. Tupu Iweghachi, ị chọrọ ka gị iPhone dị ka onye ọhụrụ, ka unu nwere ike iweghachi ihe ndabere si iCloud. Naanị mee ya dị ka nzọụkwụ n'okpuru.
Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
Mgbe ị na-okokụre erasing niile data na na ntọala gị na iPhone, gị iPhone ga Malitegharịa ekwentị ma na ị nwere ike na-amalite mwube ya ugbu a. Mgbe ị na-na-na na na nzọụkwụ dị ka e gosiri na nri.
Họrọ onye na-acha ọbara ọbara gburugburu: Weghachi si iCloud ndabere. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ ndabere na ị chọrọ ma weghachi ya na gị na iPhone.